Bit By Bit - मास सहयोग - 5.1 परिचय
विकिपीडिया अचम्मको छ। स्वयंसेवकहरु को एक ठूलो सहयोग सबैलाई उपलब्ध छ कि एक शानदार विश्वकोश सिर्जना गरियो। विकिपीडिया गरेको सफलता प्रमुख नयाँ ज्ञान थिएन; बरु, यो सहकार्य को एक नयाँ रूप थियो। डिजिटल उमेर, भाग्यवस, सहकार्य थुप्रै प्रकारका सक्षम बनाउँछ। तसर्थ, अहिले हामीले सोध्नुपर्छ: के विशाल वैज्ञानिक हामी व्यक्तिगत-सक्छन् अब हामी सँगै निपटने समाधान गर्न सक्ने समस्या-समस्या?
अनुसन्धान मा सहयोग केही नयाँ, पाठ्यक्रम छ। संग इन्टरनेट पहुँच संसारभरिका मानिसहरूलाई को अरबौं: के नयाँ छ, तर, डिजिटल उमेर मानिसहरूको धेरै ठूलो र अधिक विविध सेट संग सहकार्य सक्षम छ। म यी नयाँ ठूलो सहयोग बस किनभने संलग्न संख्या तर पनि उनीहरूको विविध कौशल र दृष्टिकोण को अचम्मको परिणाम उपज हुनेछ आशा। हामी कसरी हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रिया मा इन्टरनेट जडान संग सबैलाई समावेश गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईं 100 अनुसन्धान सहायक संग के गर्न सक्छ? के 1,00,000 सिपालु सहयोगीहरू?
त्यहाँ ठूलो सहयोग को धेरै प्रकारका, र कम्प्युटर वैज्ञानिकहरूले सामान्यतया आफ्नो प्राविधिक विशेषताहरु आधारित एक ठूलो संख्या विभाग मा तिनीहरूलाई व्यवस्थित (Quinn and Bederson 2011) । यस अध्यायमा तथापि, म तिनीहरू सामाजिक अनुसन्धान को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ कसरी आधारित ठूलो सहयोग परियोजनाहरू कोटिबद्ध लागिरहेको छु। मानव गणना, खुला कल, र वितरण डाटा संग्रह (चित्रा 5.1): खासगरी यो परियोजनाहरूको तीन प्रकारका छुट्याउन उपयोगी छ लाग्छ।
म अध्याय पछि ठूलो विस्तार यी प्रकार प्रत्येक वर्णन छौँ, तर अब मलाई प्रत्येक एक छोटकरीमा वर्णन गरौं। मानव गणना परियोजनाहरू आदर्श यस्तो लाख तस्बिरहरू लेबलिंग रूपमा सजिलो-कार्य-ठूलो-मात्रा समस्याको लागि अनुकूल छन्। यी विगतमा स्नातक अनुसन्धान सहायक द्वारा प्रदर्शन गरिएका सक्छ परियोजनाहरू छन्। योगदान कार्य-सम्बन्धित कौशल आवश्यक छैन, र अन्तिम उत्पादन सामान्यतया योगदानको सबै को एक औसत छ। मानव गणना परियोजना को एक क्लासिक उदाहरण ग्यालेक्सी चिडियाघर, एक सय हजार स्वयंसेवक मदत जहाँ खगोलविदहरु एक लाख आकाशगंगाओं वर्गीकरण छ। तपाईं स्पष्ट प्रश्नहरू formulated गर्न उपन्यास र अप्रत्याशित जवाफ देख रहे जहाँ कल खुला परियोजनाहरू समस्याको लागि आदर्श अनुकूल छन्। यी विगतमा सहयोगिहरु सोधेर संलग्न हुन सक्छ कि परियोजनाहरू छन्। योगदान विशेष कार्य-सम्बन्धित कौशल भएका मान्छे देखि आएको, र अन्तिम उत्पादन सामान्यतया योगदानको सबै को सबै भन्दा राम्रो छ। खुला कल को एक क्लासिक उदाहरण Netflix पुरस्कार, वैज्ञानिकहरूले र हैकर्स हजारौं चलचित्र ग्राहकहरु 'मूल्यांकन भविष्यवाणी गर्न नयाँ एल्गोरिदम विकास गर्न काम कहाँ छ। अन्तमा, वितरण डाटा संग्रह परियोजनाहरू आदर्श ठूलो मात्रा डाटा संग्रह लागि उपयुक्त छन्। यी विगतमा स्नातक अनुसन्धान सहायक वा सर्वेक्षण अनुसन्धान कम्पनीहरु द्वारा प्रदर्शन गरिएका सक्छ परियोजनाहरू छन्। योगदान सामान्यतया अनुसन्धानकर्ताहरूले छैन भनेर स्थानहरू पहुँच भएका मान्छे देखि आएको, र अन्तिम उत्पादन योगदानको को एक सरल संग्रह हो। एक वितरण डाटा संग्रह को एक क्लासिक उदाहरण स्वयंसेवकहरु हजारौं हेर्न चरा बारे रिपोर्ट योगदान जसमा eBird छ।
चित्रा 5.1: मास सहयोग योजनाबद्ध। मानव गणना, खुला कल, र वितरण डाटा संग्रह: यो अध्याय आम सहकार्य तीन मुख्य प्रकारका वरिपरि संगठित छ। थप सामान्यतया, ठूलो सहयोग जस्तै नागरिक विज्ञान, क्राउडसोर्सिङ, र सामूहिक बुद्धि रूपमा क्षेत्रहरू देखि विचार जोडती।
मास सहकार्य यस्तो खगोल विज्ञान रूपमा क्षेत्रहरू लामो, धनी इतिहास छ (Marshall, Lintott, and Fletcher 2015) र पारिस्थितिकी (Dickinson, Zuckerberg, and Bonter 2010) , तर यो सामाजिक अनुसन्धान मा साधारण अझै छैन। तर, अन्य क्षेत्रहरू देखि सफल परियोजनाहरु वर्णन र केही प्रमुख Organizing सिद्धान्तहरू प्रदान गरेर, म दुई कुरा तपाईं विश्वस्त आशा। पहिलो, ठूलो सहयोग सामाजिक अनुसन्धान को लागि harnessed गर्न सकिन्छ। र, दोस्रो, आम सहकार्य प्रयोग गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले पहिले असम्भव देखिन्थ्यो थिए समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम हुनेछ। ठूलो सहयोग अक्सर पैसा बचत गर्ने तरिका रूपमा बढुवा भए तापनि, यो भन्दा बढी छ। म देखाउन रूपमा, ठूलो सहयोग बस हामीलाई अनुसन्धान सस्ता गर्न अनुमति छैन, यसले हामीलाई अनुसन्धान राम्रो गर्न अनुमति दिन्छ।
तल अध्यायमा ठूलो सहयोग को तीन मुख्य प्रकारका प्रत्येक लागि, म एक prototypical उदाहरण वर्णन गर्नेछ; थप उदाहरण संग महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त अंक चित्रण; र अन्तमा ठूलो सहयोग को यो फारम सामाजिक अनुसन्धान को लागि प्रयोग हुन सक्छ कसरी वर्णन। अध्याय पाँच तपाईं आफ्नो ठूलो सहयोग परियोजना डिजाइन गर्न मद्दत सिद्धान्त निष्कर्षमा पुग्न हुनेछ।